Date My Pet » 5 Kupenga (asi True) Zvinhu About Kudanana Here Kuziva!
Zvingava zvinonakidza chaizvo kana muchiita tsvakurudzo uye kuwana zvinhu iwe vaisamboziva nezvake ino zvokufambidzana. Vamwe chokwadi iwe kuverenga kunogona kubatsira mhaka yenyu kuwana imba kiyi kana muchato kukoka vamwe zvinogona achitambura kana kunyange chete dzinonakidza. Gara shure, vanonakidzwa uye vachishamiswa nezvinhu izvi shanu kufambidzana maidi!
Kubasa kumabasa Ko Just nzira Kutara The Day!
Ukama kwakatangira kubasa ukama hazvishamisi vane yakakwirira zvikuru wokurarama pamwe vanenge 40% basa kumabasa vachipedzisira nemuchato Zvinoshamisa mupfungwa kwave vazhinji vakanga aisva kugara vamwe chimwe nechimwe’ Homwe nzira asi panguva imwe chete hazvisi zvachose zvisingashamisi. Zvichida kuda zvaunoita. Ivo Zvimwe zvakare saka uchitova zvimwe pamwe nemumwe uye unopedza nguva yakawanda kudaro pamwe kuti kana paine chinhu chinoyevedza kumativi ose pane mukana wakanaka zvimwe vanozokura kuva murudo.
TLC uye Chemistry.com Stats vekare vakaratidza kuti mukadzi mubhawa achapiwa chatted kumusoro avhareji yemaminitsi matanhatu zvikuru nokukurumidza kana akapfeka kuita-up. Ndinofunga kazhinji kacho kana mumwe fancies munhu uye vane zvishoma mberi kana chatty vachava Chat imi zvisinei asi achiti Ndinofunga zvinogona kubatsira. Unogona kuvanza nemavara uye unzwe wakagadzirira kutora nyika. Ingava chivimbo kuti kana chokwadi mavara ako haaratidzi anowana iwe munhu waunoda yakazarukira nharo!
ABC yakashuma kuti yakajairika zvepabonde kufungidzira ari pabonde panze panguva 57% apo 14% akava threesome uye 21% vavo nezvazvo. Asingasviki rechishanu vakati vanonyengera kwavo mudiwa, asi pamusoro chetatu vavo fantasized pamusoro kubirira. Pfuurei hafu vokuAmerica vanoti anovhura uye kurukura muchimuka aya vavo. Ndinofunga kuti zvikuru kuti vakawanda vari zvave pachena vavo pamusoro chii excites navo pabonde asi ndinofunga vanofanira pamwe kuchengeta shure “Ini fantasized pamusoro kubiridzira pamusoro pako Mudikamwa.” mutsetse!
Three Hakusi A Crowd!
Mumwe anoona zvakaoma nditange kukurukura dzimwe pasocial chiitiko kana paine shamwari mbiri akamira pamwe chete uye vari kukwezvwa mumwe wavo. Havadi zvimwe shamwari kuti kunzwa kuti asiyiwa shamwari yavo. Saka kana muchitsvaka kuwana kuti rinokosha munhu auye shamwari mbiri pamwe!
New York uye Washington vane zvikuru mamiriro vagari vari kuroorwa. The yaimbova iri 50% uye rimwe racho 70% saka ibvai pamusoro New York uye Washington kufadza! Tichitevera rinoti vane yakakwirira muchato pauwandu hweavo pane Idaho uye Utah panguva 60% uye 59%.